Ndị egwu abụọ na-atụ aro ka ha mepụta njikọ egwu dị egwu ma nye ha ikike n'okpuru CC0 | Site na Linux
Damien Riehl (ọkàiwu, onye mmemme na onye egwu) na Noah Rubin chọtara aghụghọ iji kwụsị ikpe ikpe n'ọdịnihu maka nwebisiinka metụtara egwu ederede ha na-enye usoro ịtọhapụ abụ olu ụtọ.
Ndị egwu gwaa igwa niile ga-ekwe omume n'ịgwa nke abụ olu ụtọ sitere na ndetu asatọ na rhythms iri na abụọ site na iji algorithm, iji dekọọ nke ọ bụla n'ime usoro MIDI. Ndị egwu abụọ a na-agba mbọ itinye ihe ndị a nke a mepụtara n'okpuru ikike ikike Creative Commons Zero bụ n'efu. Ebumnuche bụ igbochi ndị ọrụ nke ọrụ echedoro na ịdaba na ikpe iwu.
Ihe algorithm Ajụjụ, onye koodu ya na-esitebeghị na ndị egwu abụọ a, nwere ike iweputa egwu 300,000 kwa nkeji na ọgwụgwụ pụta mejupụtara a repertoire nke 68,7 ijeri-akụ na-echekwara na MIDI format.
Ya mere, bipụtara na nnukwu akwụkwọ abụọ, nke ọ bụla n’ime ha na-eru naanị ihe dị ka narị puku isii na narị puku ise na sava.
Ihe edeturu egwu di egwu na - agbanwe agbanwe na usoro onu ogugu, na-eme ka ọ dị mfe maka ndị mmepe ide algorithm. N'ezie, o zuru ezu na nke ikpeazụ ahụ na-eji otu ụzọ ahụ ndị na-agba ọsọ iji nwaa njikọta niile nke agwa agwa iji chọta paswọọdụ.
Ka osi di, aghaghi ighota na ihe ndi egwu abuo a jiri mee bu ihe ajuju.
Dịka ọmụmaatụ, ndetu nke etinyela na akaụntụ nwere oke nke ndị diatonic na isi, nke ahụ bụ, na-ebughi n'uche nkọ (ma ọ bụ mbadamba): na nke a, ihe edeturu iji jikọta akwụkwọ iri na abụọ nke ogo chromatic.
Ọzọkwa, na Riehl na Rubin algorithm na-ejedebe na otu octave, ebe abụ olu ụtọ nke abụ nwere ike ịkarị octaves atọ, atọ. E nwekwara ihe ndị mere ị ga-eji chee, ọ bụghị naanị n'oge igwu egwu ọ bụla, kamakwa n'oge raara onwe ya nye ịgbachi nkịtị. Ndị na-egwu egwu na ndị na-ese ihe kwenyere, n'eziokwu, na ihe ole na ole a nwere ike ịgbanwe ma gbanwee oke egwu nke abụ olu ụtọ,
Otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-eji Intanet eme ihe egosipụtala onwe ha n'okwu a nwere nnukwu obi abụọ, karịsịa banyere enweghị nchebara echiche ndị ọka ikpe nwere ike inye ọrụ ewepụtara site na ọgụgụ isi. Ọzọkwa, o yikarịrị ka ụfọdụ n'ime abụ olu ụtọ nke usoro a na-echebeworị site n'aka ndị edemede ndị ọzọ kere ha na mbụ.
Agbanyeghị, ekwesịrị ikwu na ọrụ a nke Riehl na Rubin rụrụ mejupụtara ụzọ nke nwere ike mepee ụzọ ndị ọzọ nke nyocha na nyocha. Nke a nwere ike ịgụnye idegharị algorithm.
N'eziokwu, ọtụtụ okwu na-eto ụzọ a nke ga-aga nke ọma n'ịchịkọta onyinye siri ike sitere na ndị mmepe na ndị oti egwu.
Dịka ọmụmaatụ, enwere ndị chọrọrịrị koodu iji mepụta aha nke nde nde olu ụtọ niile emepụtara, yana Diceware, usoro iji mepụta ahịrịokwu na-enweghị isi. Ndị egwu abụọ a nwere olile anya na ndị ọzọ ga-eme ka mbara ala nke ọrụ a gbasaa na mpaghara ndị ọzọ na-abụghị egwu pop.
Ndị abụọ malitere ọrụ a na-echeta, na N'ajụjụ ọnụ, na nsogbu ndị metụtara ịkwa ụda ọrụ egwu na-abụkarị, nke nwere ike imetụta ndị na-egwu egwu na ndị na-ese ihe n'ụzọ na-ezighi ezi.
Ikpe ndị a na-esi na ya na-adịkarị oke ọnụ na ụwa egwu, nke ga-etinye ihe ọghọm n'etiti $ 380,000 na $ 2, naanị maka ụgwọ ndị ọka iwu.
Ọzọkwa, Iwu ego a na-akwụ ma ọ bụrụ na onye ọka ikpe amata na ọ na-eme ihe dị oke elu mgbe ụfọdụ
Na nke a dịka ọmụmaatụ, ikpe, n'oge ọkọchị nke 2019, banyere abụ egwu kụrụ "Ọchịchịrị Ọchịchịrị" nke Katy Perry, na-amanye ugbu a ịkwụ ụgwọ $ 2.78, n'ihi na abụ olu ụtọ a na-ekwu okwu ga-adị ka nke abụ Ndị Kraịst site na rap nke Marcus Gray dere nke a kpọrọ "Joyful Noise".
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ndị egwu abụọ na-atụ aro ka ha mepụta njikọ egwu dị egwu ma nye ha ikike n'okpuru CC0
Eric S. Raymond, otu n'ime ndị bidoro Open Source Initiative, ekweghị ka ha nweta aha nzipu ozi